खुशियाली मनाउनुस्, डेटिङ जान र सुनसान हुन बिदा दिइएको होइन : मन्त्री बास्कोटा - Samudayiknews
असोज, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय दिवस अर्थात ‘नेशनल डे’ अब असोज ३ गते कायम भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले असोज २, ३ र ४ गते तीन दिनसम्म संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदैछ । के नेपालको राष्ट्रिय दिवस अब असोज ३ गते नै कायम भएको हो ? सरकारले किन उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मनाउन आग्रह गरेको ?
हामीले यी प्रश्न सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सोध्यौं ।
सुनसान हुनका लागि विदा दिइएको होइन । उत्साहपूर्ण सहभागिता होस् भनेर विदा दिइएको हो । कसैलाई जबर्जस्ती हुँदैन । जनताले आ–आफ्ना सांस्कृतिक भेषभुषा प्रदर्शन गर्छन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सहभागी गराउनु उर्दी होइन । यो विदा उल्लासमय ढंगले राष्ट्रिय दिवस मनाउन दिइएको हो ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, राजनीति, समाचार
Prevविप्लव समूहले गर्‍यो आछाम नपा कार्यालयमा यस्तो वि’स्फोट
Nextसोनिका रोकायाले लिइन् कपिल शर्माको अन्तरवार्ता- हेर्नुहोस भिडियो सहित